Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Chelsea Oo La Hadashey Wakiilka Robert Lewandowski, Liverpool Oo Direysa Shan Ciyaaryahan Iyo Qodobo Kale
Home Wararka Wargeysyada Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Chelsea oo la Hadashey Wakiilka Robert Lewandowski,...
Chelsea ayaa kala hadashay wakiilka Bayern Munich iyo weeraryahanka reer Poland Robert Lewandowski, oo 32 jir ah, suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqayo Stamford Bridge. (Sun)
Arsenal ayaa isku diyaarineysa inay 30 milyan oo ginni ku dalbato goolhayaha reer England Sheffield United Aaron Ramsdale, oo 23 jir ah (Talksport)
Si kastaba ha ahaatee, Gunners ayaa loo sheegay inay sare u qaado dalabkeeda Ramsdale oo ay gaarsiiso in ka badan 32 milyan oo ginni ka dib markii laga soo diiday labo dalab. (Times)
Chelsea ayaa diyaar u ah inay weeraryahanka Tammy Ibraahim ku biiro kooxda ay xafiiltamaan Premier League Arsenal si amaah ah. Tottenham iyo West Ham ayaa sidoo kale isha ku haya 23 jirkaan. (Sun)
Weeraryahanka Jarmalka Timo Werner, 25, ayaa u furan inuu ka tago Chelsea xagaagan, waxaana uu door bidaa inuu ku laabto Bundesliga. (90min)
Liverpool ayaa iibin karta daafaca dhexe ee reer England Nat Phillips, 24, garabka reer Wales Harry Wilson, 24, weeraryahanka reer Belgium Divock Origi, 26, daafaca dambe ee Wales Neco Williams, 20, iyo qadka dhexe Switzerland Xherdan Shaqiri, 29, iyagoo raadinaya inay helaan raise 60. -70m. (Liverpool Echo)
Liverpool ayaa u aragtay 24 jirka weerarka ka ciyaara West Ham Jarrod Bowen inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga. (TheAthletic)
Paris St-Germain ayaa xiiseyneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba, oo 28 jir ah, laakiin kooxda reer France ayaa u baahan doonta inay marka hore iibiso ciyaartoy. (Sky Sports)
Manchester United ayaa hogaamineysa Arsenal tartanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal Ruben Neves, oo 24 jir ah, oo ay 35 milyan oo ginni kaga soo qaateen kooxda Wolves xagaagan. (Talksport)
United ayaa weli wadahadal kula jirta daafaca reer France ee Real Madrid Raphael Varane, 28. (Daily Express)
Dhanka kale, United ayaa u soo bandhigtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Leon Goretzka 200 kun ginni isbuucii si uu u saxiixo marka 26 jirkaan qandaraaska Bayern Munich uu dhacayo xagaaga soo aadan. (Dailymail)
Laakiin Real Madrid ayaa sidoo kale durba xiriir la samaysay Gortezka si ay ugu dhaqaaqdo. (Marca)
Aston Villa ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta 23 jirka qadka dhexe uga ciyaara Norwich City Todd Cantwell. (Footballinsider247)
Villa ayaa sidoo kale diyaar u ah inay u dhaqaaqdo 23 jirka garabka ka ciyaara ee kooxda Bayer Leverkusen Leon Bailey, kaasoo lagu qiimeeyo inta u dhaxeysa 25 ilaa 30 milyan oo ginni. (Dailymail)
Everton ayaa ku biirtay liiska kooxaha xiiseynaya 28 jirka weerarka ka ciyaara ee reer England Jesse LLingard ee Manchester United . (Thesun)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland Donny van de Beek, oo 24 jir ah, ayaa go’aansaday inuu sii joogo Manchester United xagaagan inkastoo ay xiiseynayaan kooxo ka dhisan Italy, Spain iyo Germany. (Manchester Evening News)
Juventus ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto Sassuolo ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee Italy Manuel Locatelli, oo 23 jir ah (Corriere dello Sport, in Italian)
Barcelona ayaa wajaheysa dhibaato dhanka mushaarka ah waxaana lagu qasbi karaa inay sameyso qiimo dhimis dhan 441 milyan oo euro si ay ula kulanto mushaarka La Liga. (DailyStar)
Previous articleDiego Simeone oo qirtay in Saul Niguez uu ka tagi karo kooxda Atletico Madrid xagaagan
Next articleManchester United oo xiriir la sameysay wakiilka Piotr Zielinski